Ityala Ligwetywe Ngendlela Efanelekileyo EUkraine, Amalungelo Okuba Nomhlaba Akhuselwe
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBicol IsiChitumbuka IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
OKTOBHA 4, 2012
NgoSeptemba 26, 2012, iNkundla Ephakamileyo yaseUkraine yazinqumamisa iinzame zokuhlutha inxalenye enkulu yomhlaba yomhlaba weofisi yesebe yamaNgqina kaYehova eUkraine.
Lo mhlaba wathengwa ngamaNgqina ngo-1998. Kodwa ngo-2008 lowo babesithenge kuye waphinda wasithengisela iSport Development Center LLC (SDC). EUkraine loo nto yaziwa njengokuhlasela.
Isigqibo senkundla yasekuhlaleni saba sesokuba iSDC yayiwuthengiselwe ngokusemthethweni loo mhlaba yaza yazikhaba izibheno zamaNgqina.
Sekunjalo, ityala lagwetywa ngendlela efanelekileyo. NgoDisemba 2011, inkundla ephakamileyo yema namaNgqina yaye ngoAprili 2012 yasikhabela kude isibheno seSDC. Oku kwabek’ isitampu sokuba loo mhlaba ngowamaNgqina kaYehova. Emva kweenyanga ezintathu, inkundla yesibheno yaseLviv yasirhoxisa isigqibo senkundla yasekuhlaleni esasingekho mthethweni sokuba umhlaba ngoweSDC.
Kwilinge layo lokugqibela, iSDC yabhenela kwiNkundla Ephakamileyo yaseUkraine ngenxa yesigqibo sangoAprili. Noko ke, ngoSeptemba 26, ngokukhawuleza nangendlela encomekayo le nkundla yasikhaba eso sibheno, ngaloo ndlela wabe umcimbi uyaqosheliswa.
Ukuba amaNgqina kaYehova ayengaliphumelelanga elo tyala, ayeza kuphulukana nesakhiwo seeofisi zolawulo nenxalenye enkulu yempahla yawo, nto leyo eyayinokuphazamisa umsebenzi awenza kwiiofisi zawo eziseUkraine.